(၁၀) နှဈလုံးလုံး မှေးနအေ့မှနျကို မပွောခဲ့တဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူအပျေါ နားလညျခှငျ့လှတျကွောငျးပွောလာတဲ့ ငှတေီဦး –7Day Daily News
(၁၀) နှဈလုံးလုံး မှေးနအေ့မှနျကို မပွောခဲ့တဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူအပျေါ နားလညျခှငျ့လှတျကွောငျးပွောလာတဲ့ ငှတေီဦး
သရုပျဆောငျ ပွတေီဦးရဲ့ညီမဖွဈသူ ငှတေီဦးကတော့ (၁၀)နှဈကွာပေါငျးသငျးခဲ့တဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူ ကှယျလှနျသှားခဲ့တာကွောငျ့ နစေ့ဉျနတေို့ငျး ခံစားဝမျးနညျးနရေတာပဲဖွဈပါတယျ။ မနကေ့ ဒီဇငျဘာလ (၃၁) ရကျနကေ့တော့ ငှတေီဦးရဲ့ခငျပှနျး ဒေါကျတာဉာဏျလငျးဦးရဲ့ မှေးနလေ့ေးပဲဖွဈပါတယျ။ ငှတေီဦးက ဒီဇငျဘာလ (၃၁) ရကျနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ မှေးနရှေ့ငျအတှကျ အခုလိုပဲ သတိရတမျးတကွောငျးရေးသားလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ “December 31.. Happy Birthday ကိုကှီးရေ။ ဒီနကေ့ ကိုကို့ မှေးနမေ့ဟုတျတဲ့ ကိုကို့မှေးနပေ့ေါ့။ နှဈတိုငျး ဒီနဆေို့ New Year နဲ့ အတူတှဲပွီး Birthday ပါတီလုပျကွ ပြျောကွနဲ့ နှဈမြားစှာပေါ့။ ရညျးစားဘဝတုနျးက မမေကေ အင်ျဂါသားနဲ့ သဘောမတူဘူးလို့ အမှတျတမဲ့ ပွောခဲ့ဘူးတယျ။ ဗုဒ်ဓဟူးသားက ကိုယျ့အတှကျကောငျးတယျလို့လဲ ပွောမိဘူးတယျ။ ကို့မှေးနကေ့ ဘာနလေဲ့လို့ မေးတော့ Dec 31 တဲ့။ ယုံအောငျ ဇာတျလမျးကို အတိအကဆြငျပွီး လိမျခဲ့တယျ။
“ကို့ကိုမှေးတာ နှဈတဈနှဈရဲ့ နောကျဆုံးရကျ ည ၁၁နာရီ ၄၅မိနဈလေ.. အဲဒီ့နှဈရဲ့ အမှောငျဆုံးည..အမှောငျဆုံးအခြိနျ၊ ကို့အမတုနျးက ဗဒေငျက သခြောတှကျပွီး မှေးခိုငျးတဲ့ရကျထကျစောမှေးခဲ့လို့ အမက လူကောငျးအတိုငျး မဖွဈခဲ့ဘူး။ ကို့အလှညျ့ကတြော့လဲ အဲလိုဘဲ မှေးရမယျ့ရကျမှာ မမှေးတော့ ကို့မမေကေ ကို့အမလိုဖွဈမှာစိုးလို့ ဗဒေငျအရ ယတွာခပြွေီး မှေးနကေို့ ပွောငျးခဲ့တာ။ မှတျပုံတငျထဲက Oct 14 က မှေးနေ့ အစဈမဟုတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီ့ကိစ်စ ကို့အိမျကို လုံးဝသှားမမေးနဲ့နျော။ အိမျက လုံးဝမကွိုကျဘူး” ကိုယျ့မှာ ဇဝဇေဝါနဲ့ သူပွောတာယုံပွီး Dec 31 တိုငျး သူ့မှေးနကေို့ ကငျြးပပေးခဲ့တယျ။ သူကလဲ ခပျတညျတညျဘဲ သူ့ကိုသူ ဗုဒ်ဓဟူး(ရာဟု)သားဆိုပီး မှေးနအေ့စဈမှာ ဘယျလိုမှမနဘေဲ Dec 31 တိုငျး သူ့မှေးနလေို့ ခံယူပွီး ၁၀ နှဈလုံးလုံးဖွတျသနျးခဲ့တယျ။ မှေးနမှေ့မဟုတျပါဘူး။ ဖွဈတညျမှု တျောတျောမြားမြားကို ကိုယျ့အတှကျပဲစဉျးစားပွီး ကိုယျကွိုကျရငျပွီးရောဆိုပွီး နပေေးခဲ့တယျ။”
“ICU ထဲရောကျတော့ ဘုနျးဘုနျးတှကေို ဆေးဝါးတှလှေူဒါနျးပေးတော့ ဆရာတျောက ဖုနျးထဲကနေ Speaker ဖှငျ့ပီးလှမျးပွီး မတ်ေတာပို့ ဆုတောငျးပေးတယျ။ ဒကာကွီး ဘာနသေ့ားလဲ ဆိုတော့ အင်ျဂါသားပါဘုရားတဲ့။ ကိုယျက သူ့ကို ICU ထဲမှာ မနကျနိုးလာတိုငျး ငါးပါးသီလခံယူဖို့ ညအိပျယာဝငျရငျ သီလကိုပွနျဆငျခွငျပွီး ဆုတောငျးဖို့ ပွောတော့ သူကလဲ လိုကျနာပွီး လုပျရှာပါတယျ။ နောကျနကေ့တြော့ ကိုကို ဒီနေ့ သီလယူဖွဈလားဟငျလို့မေးတော့ ယူဖွဈတယျတဲ့။ ဒါဆို ကို လိမျပွောလို့ မရဘူးပေါ့ဆိုတော့ အငျး တဲ့။ အဲဒါဆို ကို့မှေးနကေ့ ဘယျနကေ့ အမှနျလဲဆိုမှ Oct 14 တဲ့။ ၁၀ နှဈလုံးလုံး လိမျနိုငျသူကွီးကို စိတျတောငျမဆိုးရကျခဲ့ပါဘူး။ စိတျမကောငျးပဲ ဖွဈခဲ့ရတယျ။ ဗုဒ်ဓဟူး(ရာဟု) သား Drဉာဏျလငျးဦးအတှကျဆိုပွီး ဆုတှတေောငျး ယတွာတှခေပြေေးကွတဲ့ သူတှကေလဲ စိတျမကောငျးဘူးပေါ့.. “ခဈြရယျ အရငျက သီလငါးပါးလုံး မလုံခဲ့ရငျတောငျ တဈပါးတော့ သခြောလုံခဲ့ပါတယျတဲ့။ ခဈြကိုယူပွီးကတညျးက ကိုဘယျသူ့ကိုမှ စိတျနဲ့တောငျမဖောကျပွနျခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ကို သစ်စာဆိုရဲပါတယျတဲ့..””
“သစ်စာမဆိုလညျး ယုံပါတယျကိုရယျ။ ကိုယျ့ယောကျြားအကွောငျး ကိုယျသိတာပေါ့။ ကိုကိုဟာ အားလုံးအပျေါတာဝနျကခြေဲ့တယျ။ ဆေးရုံပျေါမှာ ဖုနျးစသုံးနိုငျတော့ ပငျြးတဲ့အခြိနျသုံးလို့ရအောငျ ဖုနျးလေးလကျထဲထညျ့ပေးကတညျးက အားတဲ့အခြိနျ ရရငျရသလို Donate ဖို့ Click တာ မပကျြကှကျခဲ့ဘူး။ အရမျးတာဝနျကပြေါတယျ။ ဒီဘဝမှာ ကောငျးမှုကုသိုလျတှတေူတူပွုကွ ရစေကျတှေ အကွိမျကွိမျ အတူတူခခြဲ့ကွတော့ သံသရာခရီးမှာ ပွနျဆုံကွဦးမယျဆိုတာ ယုံပါတယျ။ နောကျဘဝတှကွေရငျလညျး ဒီဘဝမှာလိုပဲ တဈဦးအပျေါတဈဦး ကြေးဇူးပွုနိုငျသော ကောငျးသောဆုံတှခွေ့ငျးမြိုး၊ရစေကျကောငျးမြိုးနဲ့ ပွနျဆုံကွရပွီး တဈဦးကိုတဈဦး ပါရမီဖွညျ့ခှငျ့ရပါစလေို့ ဆုတောငျးပါတယျ။” “ခဈြကို ယူခဲ့မိတာ ကို့ဘဝအတှကျ အမှနျဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြ လို့ ကိုပွောခဲ့တဲ့အခြိနျက ကို့ကိုယူခဲ့မိလို့လဲ သေးသေးလေးတောငျ နောငျတမရခဲ့ဘူးဆိုတာ ကို့ကို ပွနျမပွောလိုကျရလို့ အဲဒါလေးလဲသိစခေငျြမိတယျ။ ကိုယျ့အပျေါဒီလောကျကောငျးတဲ့ ယောကျြားကို အင်ျဂါသားဆိုလညျး ယူမှာပါလို့ ပွနျမပွောဖွဈခဲ့တာလေးလညျး စိတျမကောငျးဘူး။ ရောကျတဲ့အရပျကနေ ခံစားသိရှိနိုငျပါစေ။ ကိုခဈြတဲ့ ကို့ရဲ့အကိုကွီးအတှကျလညျး စိတျမကောငျးမဖွဈဘဲ ဂုဏျယူနိုငျပါစေ…” ဆိုပွီး ရငျဖှငျ့လာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးရဲ့ညီမဖြစ်သူ ငွေတီဦးကတော့ (၁၀)နှစ်ကြာပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ခံစားဝမ်းနည်းနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ကတော့ ငွေတီဦးရဲ့ခင်ပွန်း ဒေါက်တာဉာဏ်လင်းဦးရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငွေတီဦးက ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ရှင်အတွက် အခုလိုပဲ သတိရတမ်းတကြောင်းရေးသားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ “December 31.. Happy Birthday ကိုကွီးရေ။ ဒီနေ့က ကိုကို့ မွေးနေ့မဟုတ်တဲ့ ကိုကို့မွေးနေ့ပေါ့။ နှစ်တိုင်း ဒီနေ့ဆို New Year နဲ့ အတူတွဲပြီး Birthday ပါတီလုပ်ကြ ပျော်ကြနဲ့ နှစ်များစွာပေါ့။ ရည်းစားဘဝတုန်းက မေမေက အင်္ဂါသားနဲ့ သဘောမတူဘူးလို့ အမှတ်တမဲ့ ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားက ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်လို့လဲ ပြောမိဘူးတယ်။ ကို့မွေးနေ့က ဘာနေ့လဲလို့ မေးတော့ Dec 31 တဲ့။ ယုံအောင် ဇာတ်လမ်းကို အတိအကျဆင်ပြီး လိမ်ခဲ့တယ်။
“ကို့ကိုမွေးတာ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးရက် ည ၁၁နာရီ ၄၅မိနစ်လေ.. အဲဒီ့နှစ်ရဲ့ အမှောင်ဆုံးည..အမှောင်ဆုံးအချိန်၊ ကို့အမတုန်းက ဗေဒင်က သေချာတွက်ပြီး မွေးခိုင်းတဲ့ရက်ထက်စောမွေးခဲ့လို့ အမက လူကောင်းအတိုင်း မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကို့အလှည့်ကျတော့လဲ အဲလိုဘဲ မွေးရမယ့်ရက်မှာ မမွေးတော့ ကို့မေမေက ကို့အမလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ ဗေဒင်အရ ယတြာချေပြီး မွေးနေ့ကို ပြောင်းခဲ့တာ။ မှတ်ပုံတင်ထဲက Oct 14 က မွေးနေ့ အစစ်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ကိစ္စ ကို့အိမ်ကို လုံးဝသွားမမေးနဲ့နော်။ အိမ်က လုံးဝမကြိုက်ဘူး” ကိုယ့်မှာ ဇဝေဇဝါနဲ့ သူပြောတာယုံပြီး Dec 31 တိုင်း သူ့မွေးနေ့ကို ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ သူကလဲ ခပ်တည်တည်ဘဲ သူ့ကိုသူ ဗုဒ္ဓဟူး(ရာဟု)သားဆိုပီး မွေးနေ့အစစ်မှာ ဘယ်လိုမှမနေဘဲ Dec 31 တိုင်း သူ့မွေးနေ့လို့ ခံယူပြီး ၁၀ နှစ်လုံးလုံးဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ မွေးနေ့မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်တည်မှု တော်တော်များများကို ကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားပြီး ကိုယ်ကြိုက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး နေပေးခဲ့တယ်။”
“ICU ထဲရောက်တော့ ဘုန်းဘုန်းတွေကို ဆေးဝါးတွေလှူဒါန်းပေးတော့ ဆရာတော်က ဖုန်းထဲကနေ Speaker ဖွင့်ပီးလှမ်းပြီး မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးတယ်။ ဒကာကြီး ဘာနေ့သားလဲ ဆိုတော့ အင်္ဂါသားပါဘုရားတဲ့။ ကိုယ်က သူ့ကို ICU ထဲမှာ မနက်နိုးလာတိုင်း ငါးပါးသီလခံယူဖို့ ညအိပ်ယာဝင်ရင် သီလကိုပြန်ဆင်ခြင်ပြီး ဆုတောင်းဖို့ ပြောတော့ သူကလဲ လိုက်နာပြီး လုပ်ရှာပါတယ်။ နောက်နေ့ကျတော့ ကိုကို ဒီနေ့ သီလယူဖြစ်လားဟင်လို့မေးတော့ ယူဖြစ်တယ်တဲ့။ ဒါဆို ကို လိမ်ပြောလို့ မရဘူးပေါ့ဆိုတော့ အင်း တဲ့။ အဲဒါဆို ကို့မွေးနေ့က ဘယ်နေ့က အမှန်လဲဆိုမှ Oct 14 တဲ့။ ၁၀ နှစ်လုံးလုံး လိမ်နိုင်သူကြီးကို စိတ်တောင်မဆိုးရက်ခဲ့ပါဘူး။ စိတ်မကောင်းပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး(ရာဟု) သား Drဉာဏ်လင်းဦးအတွက်ဆိုပြီး ဆုတွေတောင်း ယတြာတွေချေပေးကြတဲ့ သူတွေကလဲ စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့.. “ချစ်ရယ် အရင်က သီလငါးပါးလုံး မလုံခဲ့ရင်တောင် တစ်ပါးတော့ သေချာလုံခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ချစ်ကိုယူပြီးကတည်းက ကိုဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်နဲ့တောင်မဖောက်ပြန်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ကို သစ္စာဆိုရဲပါတယ်တဲ့..””
“သစ္စာမဆိုလည်း ယုံပါတယ်ကိုရယ်။ ကိုယ့်ယောက်ျားအကြောင်း ကိုယ်သိတာပေါ့။ ကိုကိုဟာ အားလုံးအပေါ်တာဝန်ကျေခဲ့တယ်။ ဆေးရုံပေါ်မှာ ဖုန်းစသုံးနိုင်တော့ ပျင်းတဲ့အချိန်သုံးလို့ရအောင် ဖုန်းလေးလက်ထဲထည့်ပေးကတည်းက အားတဲ့အချိန် ရရင်ရသလို Donate ဖို့ Click တာ မပျက်ကွက်ခဲ့ဘူး။ အရမ်းတာဝန်ကျေပါတယ်။ ဒီဘဝမှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတူတူပြုကြ ရေစက်တွေ အကြိမ်ကြိမ် အတူတူချခဲ့ကြတော့ သံသရာခရီးမှာ ပြန်ဆုံကြဦးမယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ်။ နောက်ဘဝတွေကြရင်လည်း ဒီဘဝမှာလိုပဲ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ကျေးဇူးပြုနိုင်သော ကောင်းသောဆုံတွေ့ခြင်းမျိုး၊ရေစက်ကောင်းမျိုးနဲ့ ပြန်ဆုံကြရပြီး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ပါရမီဖြည့်ခွင့်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။” “ချစ်ကို ယူခဲ့မိတာ ကို့ဘဝအတွက် အမှန်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် လို့ ကိုပြောခဲ့တဲ့အချိန်က ကို့ကိုယူခဲ့မိလို့လဲ သေးသေးလေးတောင် နောင်တမရခဲ့ဘူးဆိုတာ ကို့ကို ပြန်မပြောလိုက်ရလို့ အဲဒါလေးလဲသိစေချင်မိတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ယောက်ျားကို အင်္ဂါသားဆိုလည်း ယူမှာပါလို့ ပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့တာလေးလည်း စိတ်မကောင်းဘူး။ ရောက်တဲ့အရပ်ကနေ ခံစားသိရှိနိုင်ပါစေ။ ကိုချစ်တဲ့ ကို့ရဲ့အကိုကြီးအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဘဲ ဂုဏ်ယူနိုင်ပါစေ…” ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှဈသဈဆုတောငျးအဖွဈ တျောလှနျရေးမှာ ကိုယျနိုငျတဲ့နရောကပါဝငျရငျး အာမခြောငျခွငျးဖွငျ့ ကူညီပါဆိုတဲ့ မွနှငျးရညျလှငျ